ကိုယ်အခုမ,နေတဲ့အလေးတွေက ကိုယ့်အတွက် တကယ်ကိုဂိတ်ဆုံးအလေးတွေလား? - For her Myanmar
ဝိတ်တွေစွတ်ကျပြီး ကြွက်သားအလုံးလိုက်နဲ့ ကျစ်နေကြပြီလားချိမတို့။ (ဒီလို ကြုံတိုင်း၊ သတိရတိုင်း ဖဲ့နိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံစကေးနဲ့တော့ မရနိုင်ဘူးလေနော့် :P) ကဲပါ။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးကတော့ နှင်းပြောသလို Gym ကို သေချာစနစ်တကျ ဆော့ကျင့်လုပ်ထားတဲ့ ယောင်းယောင်းလေးတွေအတွက်ပါနော်။
Gym ဆော့တာကြာတဲ့လူတိုင်းနီးပါး Repeat Task (အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ခြင်း) လို့ခေါ်တဲ့ အရာကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလို Repeat Task ကို လုပ်တာကြာလာတဲ့အခါ ပျင်းသွားပြီး မလုပ်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအထိ ကြုံရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မနေလို့ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အနေအထားလေးမှာပဲ ရပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
နှင်းတို့ Gym ဆော့တဲ့အချိန်မှာ ထရိန်နာတွေက အမြဲတမ်း ၁၂ ကြိမ် ၄ ကျော့ (သို့) ၁၅ ကြိမ် ၃ ကျော့ ဆော့ခိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ နှင်းတို့က အကြိမ်ရေပြည့်ဖို့အတွက်ပဲ ဦးစားပေးတော့ အလေးတုံးတွေကို ကိုယ်နိုင်သလောက်လေးပဲ အမြဲတမ်းယူတတ်ကြတတ်ကြပါတယ်။ စစချင်းတုန်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်တာနဲ့ ဆရာရဲ့ဖိအားကြောင့် အလေးတွေကို အံကြီးကြိတ်ပြီး တိုးနေသေးပေမဲ့ ဆော့တာကြာလာတဲ့အချိန် ဈေးဆစ်တတ်တဲ့အနုပညာတတ်လာတာရယ်၊ နိုင်သလောက်လေးပဲသယ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ရယ်ကြောင့် ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာပါ။
အဲဒီစိတ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Motivation တွေကျလာမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိန်ခေါ်တာမျိုးကို ရပ်တန့်လိုက်တာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့တကယ့် Limit က ဘာလဲဆိုတာ မကွဲတော့ဘဲ ငါဒီလောက်ပဲလုပ်နိုင်တာလား ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က တကယ် ဒီလောက်ပဲ လုပ်နိုင်တာလား???
Related Article >>> အဆီလည်းမတက်၊ စားလို့လည်းကောင်းတဲ့ ထိုင်းစတိုင် ချဉ်ငံစပ် ဝက်သားသုပ်
နှင်းတစ်ခုကြားဖူးတယ်သိလား။ Gym ဆော့နေရင်းနဲ့ အလေးအသစ်တွေတိုးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်အရင်တုန်းက မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ခံယူထားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကို ရအောင်လုပ်မယ်လို့ တွေးပြီး ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့အထိကို မရ/ရအောင် ကြိုးစား၊ နောက်ပိုင်း လုပ်နိုင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ နဲ့ အခက်အခဲတွေက ဘယ်လောက်ပဲကြီးမားနေပါစေ ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေ ပိုပြီးတိုးလာပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒီလောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ် လို့ခံယူထားတာထက် ငါဒီထက်ပိုပြီး လုပ်နိုင်တယ်လို့ အမြဲတမ်းအားပေးပါ။ သူများတွေက ဒီလောက်မို့ ကိယ်လည်းဒီလောက်ပဲဆိုပြီးလည်း ရပ်မထားပါနဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်ချင်းလည်း မတူကြသလို Limit ချင်းလည်းမတူတာမို့ ပိုပိုပြီး ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ ကိုယ့်ပုံစံကိုမြင်ချင်ရင်တော့ အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိန်ခေါ်နေဖို့ နှင်းကအကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း တိုးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ စွတ်တိုးရင်း တိုးရင်း တကယ့် ကိုယ့် Limit ကို ရောက်နေတာတောင် စိတ်ဆောင်ပြီး အတင်းတွန်းတဲ့အခါ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတတ်တာမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရင်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ် ယောင်းတို့ရေ..
Related Article >>> ရာသီလာချိန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ၄ ချက်ကို သိကိုသိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေကတော့ နှင်း Gym ဆော့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေထဲက တစ်ခုပေါ့။ Gym တစ်ခုတည်းမှာပဲ အကြာကြီးဇောက်ချလုပ်တာရယ်၊ ဆရာအပါအဝင် Gym တစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းနှီးနေတော့ တစ်ခန်းလုံးပတ်ပြီးစကားပြော၊ အလေးကိုလည်း မ,ချင်သလိုမ ၊ မ,မချင်လည်း ဂျင်းထည့်တာတွေများပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ဘာမှဆက်မဖြစ်လာတော့တာ။
ကြားထဲမှာ ၂ လလောက်နား၊ စားချင်တာတွေစားပြီး အခုတော့ပြန်ဆော့နေပါပြီ။ ဒီ Gym မှာကကျတော့ ဆရာတွေက အရမ်းမောင်းတဲ့လူတွေမို့ တစ်နေ့တစ်နေ့ လျှာထွက်မတတ်ပြန်ကျင့်နေရပါပြီလို့ ကပ်တိုးလေးတိုင်ရင်း ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဒီနေရာမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ရပါတယ်ရှင့်။ ယောင်းလေးတွေလည်း ကိုယ်အားစိုက်သလောက် သိသာတဲ့ရလဒ်လေးတွေ ပြန်ရကြပါစေရှင်။
ကိုယျ့ Limit ရောကျနပွေီဆိုတာ သခြောပွီလား? ပွနျစဉျးစားပါဦး…
ဝိတျတှစှေတျကပြွီး ကွှကျသားအလုံးလိုကျနဲ့ ကဈြနကွေပွီလားခြိမတို့။ (ဒီလို ကွုံတိုငျး၊ သတိရတိုငျး ဖဲ့နိုငျဖို့ဆိုတာ တျောရုံစကေးနဲ့တော့ မရနိုငျဘူးလနေေျာ့ :P) ကဲပါ။ ဒီနဆေ့ောငျးပါးကတော့ နှငျးပွောသလို Gym ကို သခြောစနဈတကြ ဆော့ကငျြ့လုပျထားတဲ့ ယောငျးယောငျးလေးတှအေတှကျပါနျော။
Gym ဆော့တာကွာတဲ့လူတိုငျးနီးပါး Repeat Task (အလုပျတဈခုတညျးကိုပဲ ထပျခါထပျခါလုပျခွငျး) လို့ချေါတဲ့ အရာကိုကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ ဒီလို Repeat Task ကို လုပျတာကွာလာတဲ့အခါ ပငျြးသှားပွီး မလုပျခငျြတဲ့အထိ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ တကယျတမျးကတြော့ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးအထိ ကွုံရတယျဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အမွဲတမျးစိနျချေါမနလေို့ တဈနညျးအားဖွငျ့ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ အနအေထားလေးမှာပဲ ရပျထားလို့ဖွဈပါတယျ။
နှငျးတို့ Gym ဆော့တဲ့အခြိနျမှာ ထရိနျနာတှကေ အမွဲတမျး ၁၂ ကွိမျ ၄ ကြော့ (သို့) ၁၅ ကွိမျ ၃ ကြော့ ဆော့ခိုငျးတတျကွပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ နှငျးတို့က အကွိမျရပွေညျ့ဖို့အတှကျပဲ ဦးစားပေးတော့ အလေးတုံးတှကေို ကိုယျနိုငျသလောကျလေးပဲ အမွဲတမျးယူတတျကွတတျကွပါတယျ။ စစခငျြးတုနျးကတော့ ကိုယျ့ရဲ့စိတျအားထကျသနျတာနဲ့ ဆရာရဲ့ဖိအားကွောငျ့ အလေးတှကေို အံကွီးကွိတျပွီး တိုးနသေေးပမေဲ့ ဆော့တာကွာလာတဲ့အခြိနျ ဈေးဆဈတတျတဲ့အနုပညာတတျလာတာရယျ၊ နိုငျသလောကျလေးပဲသယျမယျ ဆိုတဲ့ စိတျရယျကွောငျ့ ဒီလိုမြိုးတှဖွေဈလာတာပါ။
အဲဒီစိတျရဲ့နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ Motivation တှကေလြာမယျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စိနျချေါတာမြိုးကို ရပျတနျ့လိုကျတာကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့တကယျ့ Limit က ဘာလဲဆိုတာ မကှဲတော့ဘဲ ငါဒီလောကျပဲလုပျနိုငျတာလား ဆိုတဲ့စိတျမြိုးတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျက တကယျ ဒီလောကျပဲ လုပျနိုငျတာလား???
Related Article >>> အဆီလညျးမတကျ၊ စားလို့လညျးကောငျးတဲ့ ထိုငျးစတိုငျ ခဉျြငံစပျ ဝကျသားသုပျ
နှငျးတဈခုကွားဖူးတယျသိလား။ Gym ဆော့နရေငျးနဲ့ အလေးအသဈတှတေိုးတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျအရငျတုနျးက မလုပျနိုငျဘူးလို့ ခံယူထားခဲ့တဲ့အရာတဈခုကို ရအောငျလုပျမယျလို့ တှေးပွီး ကိုယျရညျမှနျးထားတဲ့အထိကို မရ/ရအောငျ ကွိုးစား၊ နောကျပိုငျး လုပျနိုငျသှားတဲ့အခြိနျကတြော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုတှေ နဲ့ အခကျအခဲတှကေ ဘယျလောကျပဲကွီးမားနပေါစေ ငါလုပျနိုငျတယျဆိုတဲ့ စိတျဓာတျမြိုးတှေ ပိုပွီးတိုးလာပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဒီလောကျပဲလုပျနိုငျတယျ လို့ခံယူထားတာထကျ ငါဒီထကျပိုပွီး လုပျနိုငျတယျလို့ အမွဲတမျးအားပေးပါ။ သူမြားတှကေ ဒီလောကျမို့ ကိယျလညျးဒီလောကျပဲဆိုပွီးလညျး ရပျမထားပါနဲ့။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ယုံကွညျခကျြ၊ ခံယူခကျြခငျြးလညျး မတူကွသလို Limit ခငျြးလညျးမတူတာမို့ ပိုပိုပွီး ပွောငျးလဲတိုးတကျလာတဲ့ ကိုယျ့ပုံစံကိုမွငျခငျြရငျတော့ အမွဲတမျးကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စိနျချေါနဖေို့ နှငျးကအကွံပွုခငျြပါတယျ။
ဒါပမေဲ့လညျး တိုးလို့ရတယျဆိုပွီးတော့ စှတျတိုးရငျး တိုးရငျး တကယျ့ ကိုယျ့ Limit ကို ရောကျနတောတောငျ စိတျဆောငျပွီး အတငျးတှနျးတဲ့အခါ မလိုလားအပျတဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွဈလာတတျတာမို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အရငျဆနျးစဈကွညျ့ဖို့တော့ လိုပါလိမျ့မယျ ယောငျးတို့ရေ..
Related Article >>> ရာသီလာခြိနျမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျမယျဆိုရငျတော့ ဒီ ၄ ခကျြကို သိကိုသိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဒါလေးတှကေတော့ နှငျး Gym ဆော့တဲ့တဈနှဈအတှငျးမှာ ကွုံခဲ့ရတဲ့အခကျအခဲလေးတှထေဲက တဈခုပေါ့။ Gym တဈခုတညျးမှာပဲ အကွာကွီးဇောကျခလြုပျတာရယျ၊ ဆရာအပါအဝငျ Gym တဈခုလုံးနဲ့ရငျးနှီးနတေော့ တဈခနျးလုံးပတျပွီးစကားပွော၊ အလေးကိုလညျး မ,ခငျြသလိုမ ၊ မ,မခငျြလညျး ဂငျြးထညျ့တာတှမြေားပွီး ခန်ဓာကိုယျက ဘာမှဆကျမဖွဈလာတော့တာ။
ကွားထဲမှာ ၂ လလောကျနား၊ စားခငျြတာတှစေားပွီး အခုတော့ပွနျဆော့နပေါပွီ။ ဒီ Gym မှာကကတြော့ ဆရာတှကေ အရမျးမောငျးတဲ့လူတှမေို့ တဈနတေ့ဈနေ့ လြှာထှကျမတတျပွနျကငျြ့နရေပါပွီလို့ ကပျတိုးလေးတိုငျရငျး ဒီဆောငျးပါးလေးကို ဒီနရောမှာပဲ ရပျနားလိုကျရပါတယျရှငျ့။ ယောငျးလေးတှလေညျး ကိုယျအားစိုကျသလောကျ သိသာတဲ့ရလဒျလေးတှေ ပွနျရကွပါစရှေငျ။
Tags: confidence, gym, limit, myths, Physical, self, Weight
Ana May 21, 2019
Ana May 14, 2019
Ana May 10, 2019
Ana April 26, 2019
Ana April 22, 2019